Mma Erute ọzọ Higher Annual mmepụta ke 2016
2016 bụ ihe ọzọ na owuwe ihe ubi n'afọ nke Better Motor, n'ihi na nke ndị ahịa 'nkwado na Better ọrụ' dị ike ọrụ. Anyị na-na-ibu na-enwe ọganihu n'afọ ọ bụla. Kwa Afọ mmepụta ke 2016 bụ 2.9 nde tent, 450.000 tent mụbaa tụnyere 2.45 nde tent na 2015. Na New Year 2017, anyị ga na-na njedebe ... GỤKWUO »
On June 8, Electric Engineering na akpaaka Engineer Li Dongwei si Ohio State University USA gara Shandong Better Motor Co., Ltd. Li Dongwei, postdoctoral nchọpụta si eletriki sayensị laabu na Ohio State University USA, bụ onye nwere okpukpu abụọ dọkịta degrees isi na electric engineerin. .. GỤKWUO »
Ngo otu nke ozi usoro engineering oru ngo na Better Motor e tọrọ ntọala
On June 26, ngo otu nke ozi usoro engineering oru ngo na Better Motor e tọrọ ntọala. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd bụ na-elekọta nke emebe na-arụ ọrụ a na oru ngo. Ọ na-zubere ime ikpe ọrụ na njedebe nke Sep. Ugbu a Sanjing Electric Engineeri ... GỤKWUO »
Portescap ewebata ndị ọhụrụ 16DCT moto ya elu torque DCT nso nke Athlonix Motors. The 16DCT moto pụrụ ịnapụta aga n'ihu torque ruo 5,24 mNm na a ogologo nke naanị 26mm. The 16DCT utilizes ike Neodymium nju na Portescap si pụtara ume oru oma coreless imewe. The optimiz ... GỤKWUO »
The umeala agụụ Cleaner bụ otu n'ime handiest ezinụlọ ihicha ngwa eji taa. Ya mfe ma dị irè imewe ka ewepụ enwe ọcha ájá na ndị ọzọ obere ahụ anya na-ebupụta site n'aka, ma tụgharịa ụlọ nhicha n'ime a rụọ ọrụ nke ọma na pụtara ngwa ngwa ọrụ. Iji ihe bu ... GỤKWUO »
Mitsubishi Motors echeta Outlander BỤBU ugbo ala na China
Mitsubishi Motors ga-echeta 54.672 ugbo ala na China na mfịna windscreen wipers. The na-echeta, nke ga-amalite na July 27, bụ nke dị Outlander BỤBU ugbo ala arụpụtara n'etiti Nov 23, 2006 na Sept 27, 2012, dị ka General Administration nke Quality Supervision, Nnyocha na ... GỤKWUO »
Unveiling nke ụwa kasị nta na ike kacha ike Micro Motors
Piezoelectric ultrasonic Motors nwere ihe abụọ dị ịrịba uru, ya bụ ha elu ume njupụta na ha mfe Ọdịdị, nke ma-eme ka ha miniaturization. Anyị wuru a prototype Micro ultrasonic moto eji a stator na olu nke dị ka otu cubic millimeter. Anyị ex ... GỤKWUO »
Global micromotor mmepụta guzo 17,5 ijeri nkeji na 2015, a afọ-on-afọ-abawanye nke na 4.8%. N'ihi mkpọsa ime nke ugbua na ụlọ ọrụ na akụrụngwa, na mmepụta a na-atụ anya na-ebili ka 18,4 ijeri nkeji 2016 na obibia 23 ijeri nkeji 2020. China, ndị kasị ibu n'ụwa manufact ... GỤKWUO »